कपिलवस्तुका दुई जना संक्रमितको मृत्यु - ई-फारबेष्ट.com
Health कोरोना समाचार स्वास्थ्य
Posted on September 14, 2020 September 14, 2020 Author ई- फारवेष्ट	Comments Off on कपिलवस्तुका दुई जना संक्रमितको मृत्यु
२९ भदौ, काठमाडौं । कोरोना भाइरस संक्रमणबाट कपिलवस्तुका दुई जनाको मृत्यु भएको छ । बुटवल र भैरहवामा एक–एक जना संक्रमितको मृत्यु भएको हो । दुवै मृतक चन्द्रौटा निवासी हुन् ।
यससँगै कपिलवस्तु जिल्लामा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या ९ पुगेको छ ।
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय कपिलवस्तुका अनुसार लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलमा उपचाररत शिवराज नगरपालिका वडा नं. ५ निवासी ४७ वर्षीया महिलाको आज बिहान ४ः३० बजे मृत्यु भएको छ । मिर्गौला र उच्च रक्तचापको बिरामी ती महिलामा यही भदौ २१ गते कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो ।
यसैगरी रुपन्देहीको भैरहवास्थित भिम अस्पतालमा उपचाररत कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका वडा नं. ५ का ५८ वर्षीय संक्रमित पुरुषको पनि मृत्यु भएको छ । ती पुरुषको गएराति १० बजे मृत्यु भएको स्वास्थ्य कार्यालय कपिलवस्तुले जनाएको छ ।
उनी दमको बिरामी थिए । उनमा यही भदौ २२ गते कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो ।
Source :- OnlineKhabar.com
पूर्वराजदूत रिचर्डको शव चार महिनापछि भेटियो
Posted on September 1, 2020 September 2, 2020 Author ई- फारवेष्ट
१६ भदौ, काठमाडौं । नेपालका लागि बेलायतका पूर्वराजदूत रिचर्ड मोरिसको शव चार महिनापछि फेला परेको छ । आफ्नो घर बेन्ट्ली नजिकैको पार्कमा गत मे ६ तारिख बिहान १०ः३० मा दौडिन निस्किएका मोरिस बेपत्ता भएका थिए । ह्याम्पसायर प्रहरीले उनी नियमित कसरतका लागि जाने एलिस हल्ट जंगलमा सोमबार शव फेला पारेको हो । मृतक मोरिसको पहिचान […]
Health कोरोना समाचार स्थानीय स्वास्थ्य
डडेल्धुरा प्रयोगशालामा थप १० जनामा कोरोना पुष्टि
धनगढीः डडेल्धुरा प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा थप १० जनामा कोरोना भाईरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो २४ घण्टामा दुई सय ९० जनाको परीक्षण गरिएकोमा १० जनामा कोरोना पुष्टि भएको प्रयोगशाला इन्चार्ज ईश्वरीप्रसाद भुसालले जानकारी दिए। भुसालका अनुसार डडेल्धुराका एक र बझाङका ९ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। डडेल्धुराको अमरगढी नगरपालिकाका एकजना, बझाङको दुर्गाथली गाउँपालिकाका तीन जना, मष्ठा […]
कोरोना भाइरस महामारी: नेपाल र दर्जनौँ देशलाई कोभिड-१९ विरुद्ध खोप किन्न युनिसेफको सहयोग
Posted on October 3, 2020 October 3, 2020 Author ई- फारवेष्ट
Posted on September 14, 2020 September 14, 2020 Author ई- फारवेष्ट
Posted on September 28, 2020 September 28, 2020 Author ई-फारवेष्ट.com
चितवनमा गोरखाका कोरोना संक्रमितको मृत्यु